Imidlalo kunye nemidlalo kwi-Egypt yamandulo | Ukuhamba kwe-Absolut
Imidlalo kunye nemidlalo kwi-Egypt yamandulo
Isabella | | Yiputa
Kwiinkcubeko zakudala zeMeditera, umdlalo wezemidlalo wawunxulunyaniswa kakhulu nemibhiyozo kunye nokuzonwabisa. Nangona kunjalo, umxholo wezemidlalo kwi-Egypt yamandulo wahluke kakhulu kule nto uyiyo ngoku.
Ngapha koko, abanye abaphandi bagcina ukuba baziqhelanisa nokuzilolonga ngaphandle kwemidlalo ngenxa yokuba bengenalo negama ekubhekiseni kulo msebenzi. Ke yayinjani imidlalo kwi-Egypt yamandulo?
1 Yayiyintoni umdlalo kwiYiputa yamandulo?
2 Ngubani owayedlala imidlalo kwi-Egypt yamandulo?
3 Ngaba abafazi badlala imidlalo?
4 Ngaba imidlalo yayijongwa njengomboniso kwiYiputa yamandulo?
5 Wawuyintoni umthendeleko wepharao?
6 Ngaba wayekhona uFaro owayemi ngaphandle njengembaleki?
7 Yiyiphi indima edlalwa ngumNayile kwezemidlalo eYiphutha?
8 Ngaba wayekho uthixo onxulumene nemidlalo kwiintsomi zase-Egypt?
Yayiyintoni umdlalo kwiYiputa yamandulo?
Imozulu yelizwe ibikulungele ukuchitha ixesha elininzi ngaphandle kwaye oko bekuthanda ukuzilolonga, kodwa ngaphandle kokucinga ukuba ngumdlalo njengoko ukhulelweyo ngoku. Nangona kunjalo, bebesazi ngokugqibeleleyo ubudlelwane phakathi kokuzilolonga kunye neethoni elungileyo yemisipha.
Ngokusisiseko, ezemidlalo kwi-Egypt yakudala yayiquka imidlalo yangaphandle kunye nokulwa komkhosi kunye noqeqesho lokulwa. Kwezinye iindawo zezinto zakudala kukho amangcwaba anemifanekiso emele ubugcisa bemfazwe obufana nekarati nejudo. Umfuziselo womfanekiso wafunyanwa nakwingcwaba laseJeruef apho abantu abaliqela babonakala kwindawo yokulwa ngokungathi yayingumdlalo wamanqindi.
Omnye umdlalo kwi-Egypt yakudala owawukade usenziwa ziimbaleki. Kwakumalunga neentlanga ezincinci ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye ukubona ukuba ngubani okhawulezayo. Ukuba ngaphandle ixesha elide, ukubaleka okanye ukuqubha yayizizinto eziqhelekileyo kubo.
Omnye umdlalo wezinto zendalo ezenziwa ngamaYiputa kukuzingela iimvubu, iingonyama okanye iindlovu. Kukho amabali athi uFaro Amenhotep III weza kuzingela iinkunzi zeenkomo ezingama-90 ngosuku olunye kwaye uAmenhotep II wakwazi ukugqobhoza ikhaka lobhedu ngokudubula iintolo ezintlanu ngesaphetha esinye. Malunga nabantu, nabo babezingela kodwa yayingumdlalo omncinci njengokuzingela amadada emlanjeni.
Ama-Egypt nawo alungiselela ukhuphiswano lweenqwelo zokulwa kunye nokhuphiswano lokutola, eyayingumdlalo obalaseleyo ngelo xesha.
Ngubani owayedlala imidlalo kwi-Egypt yamandulo?
Kumawaka eminyaka eyadlulayo, ixesha lokuphila lalingelide kakhulu kwaye eYiphutha alizange lidlule kwiminyaka engama-40. Kungenxa yoko le nto abantu ababeziqhelanisa nemidlalo babebancinci kakhulu kwaye beqhele ukwenza umthambo.
Ngaba abafazi badlala imidlalo?
Nangona unokucinga ngenye indlela, Abafazi bamandulo base-Egypt babedlala imidlalo kodwa yayingeyiyo imisebenzi enxulumene nomdyarho, ukomelela okanye amanzi kodwa ii-acrobatics, ulwahlulo kunye nokudanisa. Oko kukuthi, abasetyhini badlale indima ebonakalayo kwimisitho yabucala nakwimibhiyozo yenkolo njengabadanisi kunye nee-acrobats. Namhlanje singathi aba bafazi benze into efanayo kwijiminastiki yokulinganisa.
Ngaba imidlalo yayijongwa njengomboniso kwiYiputa yamandulo?
Ngokungafaniyo nabanye abantu abanjengamaRoma okanye amaGrike, eYiphutha imidlalo ayizange ikhawulwe njengomboniso. Ngokusebenzisa imifanekiso kunye nemiboniso efunyenwe kukumbiwa kwezinto zakudala, khange kwenzeke ukuba kufumaneke izikhombisi kwiindawo ezinkulu okanye iimeko ezinxulumene nemidlalo emikhulu.
Oku kuthetha ukuba kwi-Egypt yamandulo kwakungekho nto ifana neMidlalo yeOlimpiki kodwa kunoko Ama-Egypt ayekhuphisana kwinqanaba labucala kwaye ayekwenza nje ukonwaba. Kwakungekho nabaphulaphuli.
Nangona kunjalo, ngendlela eyahlukileyo, kwakukho umthendeleko owawusenziwa ngoofaro kwaye ngandlela thile unokunxulumana nomnyhadala wezemidlalo. Lo mnyhadala ububanjelwe xa ookumkani babelawula amashumi amathathu eminyaka, ke ngoko yayingumbhiyozo onqabileyo ngenxa yobomi obuphantsi babemi ngelo xesha.
Wawuyintoni umthendeleko wepharao?
Kumnyhadala wesikhumbuzo seminyaka engama-30 yolawulo lukaFaro, inkosi kwakufuneka ihambe indawo ebiyelweyo ngohlobo oluthile lomdyarho onjongo yayo ikukubonisa abantu bakhe ukuba usemncinci kwaye unamandla ngokwaneleyo okuqhubeka nokulawula ilizwe.
Umnyhadala wokuqala wohlobo lwawo wawubhiyozelwa emva kweminyaka engama-30 yolawulo kwaye qho emva kweminyaka emithathu emva koko. Umzekelo, kuthiwa uFaro Ramses II wasweleka ngaphezulu kweminyaka engamashumi alithoba, ke uya kuba nexesha elininzi lokwenza imithendeleko eyahlukeneyo, ngaphandle kwexesha.
Ngaba wayekhona uFaro owayemi ngaphandle njengembaleki?
UFaro Ramses II wayephila ixesha elide kwaye wayethatha inxaxheba kwiminyhadala yeminyhadala emininzi kodwa yayinjalo U-Amenhotep II owayethathwa njengoyena mzekelo wempi yeembaleki, ngokwembono yobuhle okanye yomzimba.
Yiyiphi indima edlalwa ngumNayile kwezemidlalo eYiphutha?
UMlambo umNayile wawunguhola wendlela omkhulu elizweni ngelo xesha, apho iimpahla zazithuthwa khona kwaye abantu behamba. Ukulungiselela le nto, amaphenyane okuhamba ngesikhephe kunye nokuhamba ngesikhephe ayesetyenziswa, ke amaYiputa ayelungile kolu qeqesho.
Yiyo loo nto kuNayile babenokuququzelela ukhuphiswano lwabucala, nokuba ngesikhephe okanye ngokuqubha, kodwa yayingezizo iitumente zikawonke-wonke apho umntu ophumeleleyo wawongwa khona.
Malunga nokuloba, kugcinwa amaxwebhu abonisa oko Kwinayile bekukho nokhuphiswano lwangasese lokujonga ukuba ngubani onako ukubamba uninzi..
Ngaba wayekho uthixo onxulumene nemidlalo kwiintsomi zase-Egypt?
Kwi-Yiphutha yamandulo kwakukho oothixo phantse kuzo zonke iindawo zobomi kodwa okumangalisayo yayingengomdlalo ngoba, njengoko benditshilo ngaphambilana, ngelo xesha ezemidlalo zazingakhulelwanga njengokuba sisenza namhlanje.
Nangona kunjalo, amaYiputa ukuba ayenqula oothixo abakwimo yezilwanyana kwiimpawu ababezinikwe. Oko kukuthi, oothixo abanomzimba weentaka babethandwa ngenxa yobukrelekrele babo kunye nokukwazi ukubhabha, ngelixa oothixo abanesimo senkunzi yenkomo babesenziwa ngamandla ezi zidalwa zinazo, njengoko kusenzeka kwezinye izilwanyana ezinjengeengwenya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Imidlalo kunye nemidlalo kwi-Egypt yamandulo
Thatha idiphu echibini elipinki, iLake Hillier